एस पार्टीसँग तालमेल नभएको एक्लै चुनावमा जाने एमाले पार्टी केन्द्रिय सदस्य रावल « Philco Mission
एस पार्टीसँग तालमेल नभएको एक्लै चुनावमा जाने एमाले पार्टी केन्द्रिय सदस्य रावल
सिमकोट । हुम्लाको चंखेली गाउँपालिकामा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादी बीच चुनावी तालमेल नभएको एमाले पार्टी हुम्लाले खुलासा गरेको छ । केहि संचारमाध्यमा एमाले र एकीकृत समाजवादीलाई पार्टी विच चुनावी तालमेल भएको भन्ने कपोकल्पीत र झुठो समाचार प्रकाशित भएको नेकपा एमाले पार्टीका केन्द्रिय सदस्य दल रावलले आपति जनाउनु भयो ।
एमाले पार्टीका केन्द्रिय सदस्य रावलले कुनै दलसंग चुनावीय तालमेल नभएको र आफ्नो पार्टी एक्लै चुनावमा जाने बताए ।केन्द्रिय सदस्य रावल आफ्नो फेसबुक फेजमा लेख्नुभएको छ “यस खालको कपोकल्पीत र झुठो समाचार प्रकाशित नगर्न अनुरोध छ। हाम्रो पार्टी नेकपा(एमाले) को तर्फबाट अध्यक्ष पदमा क. बिमला शाही र उपाध्यक्षमा क. हंश ऐडी चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहनु भएको जानकारी गराउद्छु। ”
स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा हुम्लाका राजनीतिक दलहरु आ–आफ्नो तयारी शुरु गरेका छन् । हुम्लामा केन्द्रिय पार्टीले काँग्रेस र माओवादी केन्द्र संग चुनावमा मिलेर जाने छन् । तर एमाले एक्लै चुनाव लड्न सक्ने हैसियतको पार्टी भएको भन्दै आफूहरुले नै सात वटा गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपध्यक्ष उम्मेदारी दिएको बताए । पार्टीको पहिलो प्राथमिकतामा जनताको मन जित्ने र चुनाव जित्नै रहेको बताए । यस्तै चंखेलीमा माओवादीबाट गोविन्दबहादुर शाही अध्यक्ष र कांग्रेसबाट मैना बुढा उपाध्यक्षको उम्मेदवार छन् ।